Katidral nke Olileanya - WRSP
CATHEDRAL nke olile anya oge
1924 (Jenụwarị 29): Richard Vincent mụrụ na Kirksville, Missouri.
1940 (July 27): Troy Perry mụrụ na Tallahassee, Florida.
1947: Richard Vincent mere baptizim na Chọọchị Roman Katọlik.
1950: Vincent sonyere na Santa Barbara Province nke Order of Friars Minor.
1955: Perry nyere ikikere dịka onye nkwusa Baptist.
1960: reka Pentikọstal nke Chineke napụrụpụrụ ndị ụkọchukwu Reverend Troy Perry n'ihi nwoke idina nwoke ya.
1964 (Jenụwarị 1): Circle of Friends guzobere na Dallas.
1968: Perry dara ọnwụnwa igbu onwe ya, na-akpali ya ịmepụta Metropolitan Community Church.
1968: Reverend Troy Perry guzobere Chọọchị Obodo Metropolitan.
1970: E guzobere Churchlọ Nzukọ Obodo Obodo - Dallas.
1971 (May 23): Richard Vincent ka edere dika Deacon na nzukọ Dallas.
1971: A họpụtara Vincent ka ọ bụrụ onye pastọ mbụ nke Metropolitan Community Church - Dallas.
1971: Chọọchị Obodo Obodo - Dallas malitere ozi ụlọ mkpọrọ mbụ na Dallas County.
1972: Chọọchị Obodo Obodo - Dallas kwagara n'ụlọ ụlọ ụka mbụ raara onwe ya nye.
1972: Richard Vincent ka edoro nsọ dị ka onye ozi a họpụtara ahọpụta
1976: Obodo Obodo Obodo - Dallas kpaliri ụlọ iji kwado ndị na-eto eto.
1990: Obodo Obodo Obodo - Dallas gbanwere aha ya na Katidral nke Olileanya (COE) iji gosipụta mgbanwe ya na ozi.
1992: Katidral nke olile anya kpaliri ụlọ ọzọ iji nabata ndị otu na-eto eto.
1992 (Disemba): A na-agbasa ozi ụka ụka nke Krismas na CNN.
1993: Ndi otu uka gosiputara oge kachasi elu rue ugbua.
1999: Katidral nke Olileanya malitere ịgbasa ọrụ ofufe ịntanetị dị ndụ.
2000: E guzobere Mmemme Olileanya nke tomụaka iji nyere ụmụ mgbei na Dominican Republic aka.
2000 (July 30): Katidral nke Olileanya raara John Thomas Bell Wall mba ncheta AIDS.
2000 (August 6): Katidral nke Olileanya mepere ụka satịlaịtị na Oklahoma City.
2003 (July 27): Katidral nke Olileanya ghọrọ onye nweere onwe ya pụọ ​​na mkpakọrịta zuru ụwa ọnụ nke Chọọchị Ọchịchị Obodo Obodo.
2005: A gbakwụnyere Chapel Udo nke ụka n'ụlọ ụka. E hiwere olile anya nke Udo na ikpe ziri ezi.
Febụwarị 6, 2005 ka a họpụtara Rev. Dr. Jo Hudson Senior pastọ.
2005 (October 30): Katidral nke Hope tozuru oke maka mmekọ na United Church of Christ.
2006: United Church of Christ nabatara njikọ na Katidral nke Olileanya.
2012 (July 16): Reverend Richard Vincent nwụrụ mgbe ọ dị afọ iri asatọ na asatọ.
2015 (Eprel 12): A họpụtara Reverend Dr. Neil G. Cazares-Thomas ka ọ bụrụ onye ụkọchukwu pastọ.
Akụkọ banyere Katidral nke Olileanya (COE) malitere na Troy Perry na Obodo Obodo Obodo. A mụrụ Perry [Foto dị n'aka nri] na 1940 na Tallahassee, Florida. Ọ nwere mmasị n'ozi mgbe ọ dị obere, na-enye ikikere dị ka onye nkwusa mgbe ọ dị nanị afọ iri na ise. Ọ kwagara Illinois dị ka onye na-eto eto, ebe ọ bụ ndị ụkọchukwu na Pentikọstal Church nke Chineke ruo afọ ole na ole ruo mgbe a napụrụ ya ọnọdụ ya n'ihi idina ụdị onwe ya. ("Rev. Dr. Troy Perry" 2016; Perry 2002). Edere Perry maka ọrụ agha na 1965 ma nọrọ mba ofesi afọ abụọ (Bromley 2011).
Na 1968, n'ihi ihe isi ike o mere ka mmekọrịta nwoke na nwanyị ya na okwukwe ya dịkwuo mma, yana nkewa siri ike nke mmekọrịta dị ogologo oge, Perry nwara igbu onwe ya. Mgbe ọ lanarịrị ọnwụnwa a, yana agbamume sitere n'aka ndị enyi ya, ọ chọpụtara na ọ dị mkpa inwe ụka nke ndị Kraịst na-abụghị nwoke na nwanyị nwere ike ịbanye ("Rev. Dr. Troy Perry" 2016; Perry 2004). Mgbe afọ ahụ gachara, Reverend Perry duziri ọrụ izizi maka Churchlọ Nzukọ Obodo Metropolitan ọhụrụ. N'ime afọ anọ, Metropolitan Community Church (MCC) nwere ngalaba guzobere n'ihe karịrị steeti iri na abụọ, gụnyere ngalaba ụka Dallas nke ga-emesị bụrụ Katidral nke Olileanya (Bromley 2011; Perry 2004).
Ntọala nke Obodo Obodo Obodo - Dallas (MCCD) malitere site na nguzobe nke Circle of Friends na Dallas na Jenụwarị 1, 1964 site na ụmụ nwoke nwoke nwere mmasị nwoke ise na ndị ozi anọ na-abụghị nwoke nwere mmasị nwoke (Mims 2009: 17). Afọ ise ka nke ahụ gasịrị, onye otu Circles of Friends, Rob Shivers, kpebiri ịmalite ụka MCC na Dallas (Mims 2009: 32). Na July 30, 1970, otu mmadụ iri na abụọ gbakọtara n'otu ụlọ na Dallas, Texas, iji kwurịta nguzobe nke ụka. MCCD ghọrọ onye nke asatọ nke Universal Fellowship of Metropolitan Community Churches (UFMC) na Mee 23, 1971. Reverend Louis Loynes nke MCC Los Angeles nọchitere ndị otu na mmemme iwu. Ihe akuku nke ulo uka MCC di na Dallas bu ihe ijuanya nye obodo banyere oke nchebe, ma Dallas, nke bu obodo nke iteghete na United States, nwekwara nke isii buru ibu nwoke nwere mmasị nwoke na US
Richard Vincent ghọrọ onye pastọ mbụ nke ụka ọhụrụ ahụ. [Foto dị n'aka nri] A mụrụ ya na 1924 n'ezinụlọ na Kirksville, Missouri. O kwuru na ọ biri ndụ na-enweghị atụ ruo mgbe ọ sonyere ndị Marines n'oge Agha IIwa nke Abụọ. Mgbe agha ahụ gachara, Vincent gbasoro akara ugo mmụta injinia na Mahadum Purdue. N’oge ọ nọ na mahadum, Vincent mere baptizim n’ime Chọọchị Roman Katọlik. Mgbe Vincent gụsịrị akwụkwọ na Purdue, ọ kwagara Key West, Florida. Nke a gosipụtara mmekọrịta mbụ Vincent na mmekọrịta nwoke na nwanyị (Vincent 2010). Na 1953, Vincent sonyeere Santa Barbara Province nke Order of Friars Minor, usoro Katọlik Franciscan, dịka o chere na a kpọrọ ya oku. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ afọ atọ nke ndị ụkọchukwu, ndị isi ya nwere nkụda mmụọ wee hapụ iwu ahụ na 1956. Na 1970, Vincent zutere Reverend Troy Perry n'ihi mmasị ya na ozi ọhụụ Metropolitan Community Church. Mgbe ọ gachara nzukọ gbasara mgbasawanye nke Obodo Obodo Obodo na Dallas, Vincent sonyere na Board of Oversers maka ụka ọhụrụ ahụ. Mgbe akwadoro MCCD, ndị isi ụka ọzọ họpụtara Vincent ka ọ bụrụ dikọn site na ndị isi ụka ndị ọzọ, wee họpụta ya ịbụ onye pastọ mbụ nke ụka. Vincent nyeere ọtụtụ chọọchị aka n'oge mbụ, dị ka ozi ụlọ mkpọrọ dị na mpaghara (Vincent 2010). Mgbe a hoputara ya na Board nke ndị okenye maka Metropolitan Community Church na 1973, Vincent bidoro ịrụ ọrụ ọzọ maka MCCD n'ozuzu ya, ma jiri nwayọ pụọ na Dallas ụka. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na ndị okenye, ọ nọrọ na MCCD, na-adịgide ruo 2003 mgbe Katidral nke Olileanya ugbu a kwụsịrị na mkpakọrịta Metropolitan Community Church (Vincent 2010). Vincent laghachiri n'okpukpe Roman Katọlik ruo mgbe ọ nwụrụ na 2012.
N’afọ 1990, ụka ahụ degharịrị aha ya site na Metropolitan Community Church - Dallas na Katidral nke Olile anya iji gosipụta ụfọdụ mgbanwe na nkwupụta ozi ya, tinyekwara akara ntụgharị maka nnukwu ụlọ n’ihi ọgbakọ na-eto eto (“History” nd) . N'ime 1990s na mbido 2000s, enwere oge uto ngwa ngwa na mmepe maka Katidral nke olile anya. Ndị òtù ụka toro ruo ọtụtụ puku; a bịara mara ya dị ka ụlọ ụka LGBT kasị ukwuu n'ụwa. Edere ọrụ Sọnde ka e wee lelee ha na ịntanetị, ọtụtụ ndị ọrụ ebere ma ọ bụ òtù na-enweghị ọrụ na mmemme nke Katidral na-esonye ka emebere ("History" nd; Johnston na Jenkins 2008).
Na 2003, ọgbakọ nke Katidral tozuru oke ịhapụ ọgbakọ Universal Fellowship nke Metropolitan Community Chọọchị ụka. Kaosinadị, ka afọ atọ nke nnwere onwe nọrọ na ya, Katidral nke Hope jikọtara ọnụ na otu nnwere onwe United Church of Christ (UCC) Katidral nke Olileanya ejidesiwo njikọ ya ike na Metropolitan Community Churches, ka osila dị, ọtụtụ ndị ụkọchukwu ugbu a soro ha rụọ ọrụ ("History" nd; "Ndị ụkọchukwu anyị" nd).
UCC, na COE dị ka njikọ, na-anya isi na ha bụ ụka nke mbụ:
Yabụ na anyị bụ ndị ụka okpukperechi mbụ mere ka onye Afrịka-Amerịka họpụta, onye mbụ ehiere nwanyị, onye mbụ họpụtara nwoke nwere mmekọ nwoke na nwanyị, yana ụka ụka Kraist izizi gosipụtara ikike nke nwoke na nwanyị ịlụ di na nwunye. Anyị nọ n’isi nke ndị na-emegide ịgba ohu. Anyị nọ na-ebute ụzọ nke ịgba ọchịchị mgba okpuru na Civil Rights movement ("About Us" nd).
Katidral nke Olileanya jikọtara ọtụtụ ụkpụrụ Ndị Kraịst, nkwenkwe, na nkuzi. N'ime afọ iri anọ na asatọ ọ dịrị, ọ nakweere echiche sitere na roplọ Nzukọ Obodo Metropolitan, United Church of Christ, na Center for Progressive Christianity. Dabere na weebụsaịtị Katidral of Hope (nd), "ebumnuche nke Katidral nke Olileanya bụ iweghachite Iso aszọ Kraịst dịka okwukwe nke oke amara, nsonye nke ukwuu, na ọmịiko na-enweghị atụ." Nkwenkwe ndị a gụnyere itinye aka nke ọtụtụ ndị dị mkpa Agba Ọhụrụ, dị ka nkwenye na Chi nke Chi Kraịst, gụnyere ndị sitere na nzụlite niile n'okwukwe, ịma aka mmegbu, na ịnye ndị ụwa na-atụ n'ọnụ.
Katidral ahụ lekwasịrị anya na ikpe ziri ezi nke ọha na eze na mgbakwunye na ọrụ okpukpe ya, dị ka "ọrụ ụlọ na ndị ọzọ na-emegbu emegbu na ndị a na-emegbu emegbu" (Johnston na Jenkins 2008). Nkwenkwe ndị a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Katidral dị ka nkwenkwe ha gbasara nkwenkwe Ndị Kraịst. Na peeji nke “Ihe Anyị Kwere” nke weebụsaịtị Katidral ahụ, ụka na-ekwusi ike na ya nabatara ụkpụrụ ndị dị ka “inye aka na ịkwado maka ndị ogbenye, ịkwanye gburugburu ebe obibi ugwu na ịnabata mmehie dị ka mmegbu dị ka mmekọahụ, ịkpa ókè agbụrụ, ịkpa ókè agbụrụ, na homophobia. ” Chọọchị ahụ na-elekwasị anya gụnyere gụnyere ndị ọdịnala ọdịbendị na ndị na-emekpa ahụ na-enweghị ike ịhapụ ndị obodo ndị ọzọ, ọkachasị n'ihi ọnọdụ mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze, mmekọrịta nwoke na nwanyị, ma ọ bụ njirimara nwoke na nwanyị ("Ihe Anyị Kwere" nd; Johnston na Jenkins 2008).
Imirikiti omume ndị mere ka Katidral nke olile anya dị iche na ụka ndị Kraịst ndị ọzọ bụ mmemme ọrụ ebere na mgbasa ozi emere maka ndị na-abụghị nwoke na nwanyị ma ọ bụ ndị dara ogbenye. Iji maa atụ, n’afọ 2000, onyinye onyinye Katidral karịrị $ 1,000,000 iji “nyere aka iweta ikpe nkwụmọtọ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ndị na-enwetaghị ikike, na ndị a na-emegbu emegbu na Dallas, Texas, na ebe dị iche iche gburugburu ụwa (Johnston na Jenkins 2008).
Katidral ahụ nwere ọtụtụ mmemme yana mmekọrịta ya na ndị otu na-enye ya ohere ịga n'ihu nchụso ndị a. Okpukpe nke chọọchị na-eme ihe ndị a bụ "Naanị ka ha hụ ihe anyị na-eme," a nabatakwala ya dị ka ụkpụrụ nke Katidral of Hope na mmemme mmekọrịta mmadụ na ibe ya ("Mgbasa Ọha," nd). Dịka ọmụmaatụ, na 1997, Katidral nyeere ụlọ akwụkwọ elementrị na mpaghara Dallas dị ala na-enweghị ego site na ịnye mkpa na nwelite dị ka usoro ntụ oyi, ngwa ụlọ akwụkwọ, yunifọm, na ego maka mmemme nka mara mma (Johnston and Jenkins 2008). Ule ule mechara bilie, ewepụrụ ụlọ akwụkwọ ahụ na ndepụta nke ụlọ akwụkwọ na-adịghị eme nke ọma.
E hiwere usoro ihe omume ụmụaka na 2000 iji baara ụmụaka uru na mpaghara ụlọ akwụkwọ Dallas yana ụmụ mgbei na Dominican Republic ("History" nd; Johnston na Jenkins 2008). Ọrụ afọ ofufo ndị ọzọ bụworo akụkụ na-agbanwe agbanwe nke ozi ahụ gụnyere nhicha ndị agbata obi na mpaghara ndị na-enweghị ego na-enweghị oke ma ọ bụ na-enweghị ọrụ nhicha obodo, yana idozi ụlọ na mpaghara ndị ahụ.
Ndị so na Katidral nke Olileanya toro site na akụkọ ihe mere eme ya, a tụlekwara ụka ahụ dịka ụka LGBT kachasị ukwuu n'ụwa, ọ bụ ezie na enwere nnukwu ụka dị na Dallas-Ft. Worth mepere emepe. COE bụ ndị ụkọchukwu anọ, otu onye ụkọchukwu ụkọchukwu na ndị ụkọchukwu aturu atọ na-eduzi, na-akwado ọtụtụ ndị ụkọchukwu na-ahazi mmemme izi ozi dị iche iche nke Katidral ahụ. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya nyere akụkọ ihe mere eme nke COE, ọtụtụ n'ime ndị isi ụka nwere njikọ chiri anya na MCC.
Onye bụbu ụkọchụkwụ nọ ugbu a bụ Reverend Niel Cazares-Thomas, onye bịara Katidral ahụ n’afọ 2015. Ọ bụrụburu ụkọchukwu afọ iri na atọ na Metlọ Nzukọ Obodo Metropolitan dị na Los Angeles, ụlọ ụka izizi nke ozi ahụ. Na mgbakwunye, tupu ọ bịarute na Katidral nke Olileanya, Rev. Cazares-Thomas jere ozi n'ọtụtụ bọọdụ na otu n'akụkụ ọrụ ozi niile nke Obodo Ọchịchị Metropolitan. Ọ malitere ọrụ ozi ya na Metropolitan Community Church dị na Bournemouth, England; n'oge ahụ, Queen Elizabeth II mara ya maka ọrụ ya na obodo (Moujaes 2015). Ọ nwere usoro mmụta mmụta mmụta dị omimi nke ukwuu, ebe ọ debanyere aha ma gaa ụlọ ọrụ atọ iji nweta ogo mmụta nke Nna-ukwu. Cazares-Thomas mechara gaa San Francisco Theological College site na 2002 ruo 2009 iji nweta akara mmụta Dọkịta nke Ozi ("Ndị ụkọchukwu anyị" nd).
Dịka akụkụ nke atụmatụ mgbasawanye ya siri ike, COE arụọla Chapel of Hope's Interfaith Peace Chapel [Foto dị n'aka nri] na mgbidi mgbịrịgba na-eso ya nke onye omenkà a ma ama bụ Philip Johnson mere. Spiegelman (2010) na-akọwa ime dị ka ndị a:
Enweghi ihe ịchọ mma n'ime, ọbụnadị ebe ịchụàjà, naanị ikpo okwu bamboo dị n'okpuru mbara igwe, nke enwere ike idowe tebụl, piano ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. Lọ ahụ ga-arụ ọtụtụ ọrụ ma bụrụ ọtụtụ ihe n’ọtụtụ otu. Ala dị larịị, na-emepụta ihe ma na-egbu maramara. Enweghị nka, ma ebe ahụ adịghị adị efu ma ọ bụ na-enweghị mmetụta. Kama nke ahụ, mmụọ nke mmụọ ịdị jụụ na-enye ya. Tụgharị uche karịa ozizi na-akọwa ụlọ na ahụmịhe nke ịnọdụ n'ime ya.
Katidral nke Hope kwusiri ike na ebumnuche nke ụlọ ụka ahụ dị ka njikọta ngwakọta ofufe ("Architecture" nd).
The Interfaith Peace Chapel na-enye ebe dị nsọ maka ndị okwukwe niile, yana maka ndị na-ekwupụta enweghị okwukwe, ịbịakọta ọnụ na ịdị n'otu. N'agbanyeghị isiokwu ma ọ bụ esemokwu n'èzí, n'ime mgbidi nke Interfaith Peace Chapel a na-anabata okwukwe, agbụrụ na agbụrụ niile. Chalọ uka bụ ihe atụ nke imekọ ihe ọnụ nke mmụọ maka ndị ọzọ nke ụwa.
Katidral nke olile anya echewo ihu ma na-eche ọtụtụ nsogbu ihu, ma n'ime ma na mpụga. Na mpụga, Katidral nke Olileanya chere mmegide na-aga n'ihu ihu, ọ bụ ezie na ọ dịghị onye dị oke njọ dị ka UFMCC funahịrị ụlọ ụka atọ na-agba ọkụ na 1973 (Mims 2009: 51-52). Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na Katidral nke Olileanya butere ọgụ ebe ọ bụ na ndị ụka mejupụtara ọkachasị ndị mmekọ nwoke na nwoke ma dịkwa na mpaghara "Bible Belt" na-achọghị mgbanwe. Iji maa atụ, ụka gbalịrị ịzụrụ ọtụtụ ụlọ ụka dị ka ndị otu ọgbakọ ya na-abawanye. Kaosiladị, mgbe ndị bịara ịzụta ya bịara mara, a na-ewepụ onyinye ha. (“Mmalite,” nd). A kọrọ na otu ọgbakọ yiri egwu "gbaa ụlọ ha ọkụ n'ala karịa ịnwe ọgbakọ mmekọ nwoke na nwoke n'iji ụlọ ọrụ ahụ" (Katidral nke Olileanya 1998).
Ndi otu parish nwere nsogbu. Johnston na Jenkins (2008) na-akọ na:
N'ọtụtụ oge ụlọ ụka abụwo ihe ngosi site n'aka ndị okwukwe, ndị otu Kraịst "na-ekele" ndị otu mgbe ha rutere maka ofufe. Ndị otu a na-ebu ihe ịrịba ama na ihe ncheta nke asị Chineke kpọrọ asị maka ndị mmekọ nwoke na nwoke ma ọ bụ nwanyị nwere mmasị nwanyị ma jiri bullhorns na-arịọ nchegharị n'aka ndị mmekọ nwoke na nwoke.
A na-ezere ma ọ bụ na-eleghara ndị isi chọọchị anya na ndị isi chọọchị Dallas ndị ọzọ ma na-emekọ ihe, chọọchị ndị ọzọ kwụsịrị na mmemme obodo nke COH nyere isonye, ​​na ụlọ ụka ejirila homophobic graffiti mee ihe karịrị otu oge (Fox Ndị Ọrụ Mgbasa Ozi 2017).
COE na-aga n'ihu na-eme ihe omume obodo ma na-akpachara anya. Nnukwu onye ụkọchukwu Reverend Neil Cazares-Thomas kwuru na:
Anyị na-abanye na m na-eche na oge dị na mba anyị ebe enyerela ịkpọasị na asị na mmebi iwu mmekọrịta nwoke na nwanyị n'ụzọ ụfọdụ, yabụ dịka ọgbakọ anyị nọ na nche na ihe ndị a ga-eme (Fox News Staff 2017).
O doro anya na nsogbu ndị na-adị ogologo oge na-eche COH nwere ike ịbụ nke dị n'ime karịa mpụga. Chọọchị ahụ nwere nsogbu idu ndú malitere na mbido afọ 2000. E nwere ndakpọ nke ndị òtù na onyinye, nkewa n'etiti ọgbakọ, nchịkwa ego na ezighi ezi, mkpesa banyere onye isi ikike, yana mmekọrịta esemokwu na UFMC. Chọọchị ahụ, n'okpuru nduzi nke Reverend Michael Piazza, bụ onye weghaara ọnọdụ ya na 1987, wuru ebe nsọ $ 3,500,000 na mmalite 1990s, mana Piazza kwupụtara ọkwa mkpọsa ọhụụ na-atụ anya ikike dị ukwuu mmadụ 2,300, katidral $ 20,000,000 nke haziri onye a ma ama na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ bụ Phillip Johnson na 1996. Nsogbu ego bidoro ka onyinye ụka nyere jụrụ na ọnụ ahịa ihe owuwu rịrị elu. Na 2002, esemokwu ahụ na UFMCC kpebiri site na ụka kwụsịrị na Federation. Ndị na-emegide nkwenye ahụ guzobere ọgbakọ ọhụrụ, Metropolitan Community Church of Greater Dallas. Afọ atọ mgbe nke ahụ gasịrị, na 2005, enwere nhazigharị ndị ndu dịka COE họpụtara Reverend Dr. Jo Hudson Senior Pastọ na Reverend Michael Piazza ghọrọ Dean nke Katidral na Onye isi ala nke Olileanya Udo na Ikpe ziri ezi. Nsogbu ego gara n'ihu wee duga na nkwụsị na ịkwụ ụgwọ. Piazza nọgidere na ndị ọrụ ruo afọ ole na ole tupu ya ewere ọnọdụ dị ka onye pastọ okenye Chọọchị Virginia-Highland nke Atlanta, nke nwekwara njikọ na United Church of Christ. COE chọrọ njikọ na United Church of Christ na 2005 ma kwado ya n'afọ na-eso ya. Reverend Hudson jere ozi dị ka Onye Isi Pastọ ruo 2015 mgbe Rev. Dr. Neil G. Cazares-Thomas [Foto dị n'aka nri] hoputara n'ọkwa ahụ.
COE na-eche ọdịnihu a na-ejighị n'aka ugbu a. Thetù ahụ malitere na Chọọchị Obodo Obodo na-adọrọ mmasị ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-edina nwanyị na-abụghị nke ezinụlọ. Ọgbọ ahụ bụ isi ntọala nke usoro ahụ. Ya mere, dika otutu ndi otu okpukpe ohuru, mmeghari ahu na-eche ihe ịma aka nke ogani aka nká. Na mgbakwunye, agbanyeghị, mmegharị ahụ enwekwaghị ụfọdụ ezigbo ike dị ka ndị LGBT achọpụtala nnabata ka ukwuu n'okpukpe okpukpe. COH ekwuola okwu ndị a site na itinye aha ya na United Church of Christ, otu n'ime ụka Protestant kachasị nwere obi ọma. Nke a nwere ike belata etiti nke mmekọahụ / okike dị ka isi okwu nke njirimara ọgbakọ ma gbasaa ikike ndị otu COE (Kunerth 2010; Haug 2011). N'ezie, a ga-ekpebigharị ihe ịga nke ọma kachasị na atụmatụ a.
Foto # 1: Foto nke Reverend Troy Perry.
Image # 2: Foto nke Reverend Richard Vincent.
Foto # 3: Foto nke Chapel of Hope's Interfaith Peace Chapel.
Image # 4: Foto nke Reverend Dr. Neil G. Cazares-Thomas.
“Ije.” Katidral nke Olileanya weebụsaịtị. Nweta site na https://www.cathedralofhope.com/architecture na 3 November 2018.
Bromley, David. 2011. "Obodo Obodo Obodo." Okpukpe Okpukpe na Ime Mmụọ, Nweta site na www.wrldrels.org/2016/10/08/metropolitan-community-church/ na 3 November 2018.
Ndị ọrụ Fox News. 2017. "Graffiti na Katidral nke Olileanya ịbụ nyocha." KDFW, January 5. Nweta site na www.fox4news.com/news/graffiti-at-cathedral-of-hope-being-investigated na 3 November 2018.
Haug, Jim. 2007. "Nwoke nwere mmasị nwoke ụka tụfuru ndị otu ka nnabata gbasara." Akwụkwọ akụkọ News Online, October 8. Nweta site na http://telling-secrets.blogspot.com/2007/10/gay-church-loses-members-as-acceptance.html na 1 November 2018.
“Akụkọ ihe mere eme.” nd Katidral nke olile anya - Homelọ. Nweta site na www.cathedralofhope.com/new/history na 3 November 2018.
Johnston, Lon B., na David Jenkins. 2004. "Ọgbakọ Ndị Nwoke Na Nwanyị Na-edina Nwanyị Na-achọ Ikpe Ziri Ezi Maka Ọha Obodo Ndị Ọzọ. Akwụkwọ akụkọ nke Gay & Lesbian Social Services 16: 193-206.
Kunerth, Jeff. 2010. "Ọgbọ ọdịiche imperils gay ụka." Orlando Sentinel, December 31. Nweta site na https://www.orlandosentinel.com/news/orange/os-young-gays-church-future-20101231-story.html na 3 November 2018.
Mims, Dennis. N'afọ 1992. Katidral nke Olileanya: A History of Christianity Progressive, Civil rights, and Gay Social Activism na Dallas Texas, 1965-1992. Nkuzi Master, Mahadum nke North Texas.
Moujaes, Anthony. 2015. “Katidral nke olile anya na-akpọ Pastorkọchukwu ọhụrụ.” United Church of Christ, April 14. Nweta site na www.ucc.org/cathedral_of_hope_pastor_04142015 na 3 November 2018.
“Ndị pastọ anyị.” nd Katidral nke olile anya - Homelọ. Nweta site na www.cathedralofhope.com/new/our-pastors na 3 November 2018.
Perry, Troy. 2002. “Mkpu. Okenye Troy Perry. ” Troy Perry • Profaịlụ, " LGBT okpukpe Archives Network, Ọktọba. Nweta site na www.lgbtran.org/Profile.aspx?.E.ID=11 na 3 November 2018 ..
Perry, Troy. 2004. "Akụkọ banyere MCC." Chọọchị Obodo Obodo. Nweta site na www.mccchurch.org/overview/history-of-mcc/ na 3 November 2018.
“Mkpu. Dr. Troy Perry. ” 2016. Ihe na-emetụta ndị na-agbapụta mmiri ” March 8. Nweta site na www.thelavendereffect.org/projects/ohp/troy-perry/ na 3 November 2018.
Spiegelman, Willard. 2010. "Ọ dịghị ahụkarị Texas Church." Wall Street Journal, December 22. Nweta site na https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704369304575633332577509918 na 30 October 2018.
Thomas, Christopher. 2010. “Dr. Sprinkle na-enweta onyinye a na-akwanyere ugwu site na Katidral nke Olileanya. ” Ụlọ Akwụkwọ Nsọ nke Brite, June 30. Nweta site na https://brite.edu/dr-sprinkle-receives-distinguished-award-from-cathedral-of-hope/ na 3 November 2018.
Vincent, Richard. 2010. “Richard Vincent.” LGBT okpukpe Archives Network, Mee. Nweta site na www.lgbtran.org/Profile.aspx?ID=275 na 3 November 2018.
“Ihe Anyị Kweere.” nd Katidral nke olile anya - Homelọ. Nweta site na www.cathedralofhope.com/new/what-we- kweere na 3 November 2018.